सम्बृद्ध रोल्पा बनाउने हो । रोल्पा क्षेत्र नं. २ का बाम गठबन्धनका साँझा उमेद्वार एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ – रोल्पा समाचार
२०७४ कार्तिक २६, आईतवार १५:१९ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७४ कार्तिक २६, आईतवार १५:१९ गते
कात्तिक २६ गते रोल्पा
रोल्पा समाचार साप्ताहिकका सम्पादक मानसिंह बिकले आगामी मंसिर १० गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि र प्रदेशको निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. २ का बाम गठबन्धनका साँझा उमेद्वार एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ सँग निर्वाचन रोल्पाको आगामी कार्यक्रम र प्रतिवद्धताका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
कलिलै उमेरमा परिवर्तनको पक्षमा उभिदै २०४३ सालमा अ.ने.रा.स्व.वि.यू (छैठौ) को साधरण सदस्यता प्राप्त गरी राजनीति जीवनको शुरुवात गरेको थिए । २०४३ सालको कथिट राष्ट्रिय चुनाव विरोधमा कार्यक्रमहरुमा संलग्न हुँदै २०४६ सालको पंञ्याती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि न.क.पा. (मसाल) ले लिएको निर्णयलाई भूमिगत रुपमा कार्यन्वयन गर्दै आएको थिए । २०४६ सालमा पञ्चायको अन्त्य पश्चात विद्यार्थी संगठनकै जिल्ला सदस्य हुँदै २०४८ सालमा ने.क.पा. (एकता केन्द्र) को सदस्यता प्राप्त २०५० सालमा ने.क.पा( एकता केन्द्र) को सदस्यता प्राप्त गरेको थिए । २०५० साल देखि २०५६ सालमा विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्यतामा रही काम गरेको थिए । २०५८ सालमा ने.क.पा. (माओवादी) रोल्पा जिल्ला संगठन समितिको सेक्रेटरी भएर २०५९ सालसम्म काम गरको थिए । पाल्पा जिल्लाको इञ्चार्ज २०६३ देखि हालसम्म रोल्पा जिल्लाको इञ्चार्ज रुपमा कार्यरहत रहेको थिए । ०५९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, २०६२ सालमा पार्टीको पोलिट व्यूरो सदस्य, पार्टीको चुनबाङ बैठकले विग्रेड कमिसारको जिम्मेवारी दिएको थियो । २०६२ चैत्रमा पाल्पामा माइन विष्फोट हुँदा बायाँ हात पुरै र दायाँ हात अधिकांश गुमेको छ भने दायाँ कान फुटेको अवस्थामा रहेको छ । २०६४ सालदेखि जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग सङ्गठनको अध्यक्ष पदमा रहँदै आएको छु ।
देश हालसम्म पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहँदै काम गर्दै आएको छु । जनताको सेवा अविचलित वा निरन्तर रुपमा गर्दै आइयो । तर जनप्रतिनिधिको रुपमा होइन पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा जनताको सेवा गरे भने अब जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैछु ।
रोल्पाली जनताले तपाई र तपाईको पार्टीलाई किन भोत दिने ?
मलाई र मेरो पार्टीलाई मात्रै भोत दिने होइन । म वाम गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हँु र हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को प्रस्तावित उम्मेद्वार भएकोले हाम्रो संयुक्त घोषणा पत्रद्वारा हाम्रो कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने छौं ।
तपाईको पार्टी किन बाम एलान्स गरेको हो ?
वाम एलाइन्स गर्नुको उद्वेश्य दुई ओटा छन् । एक तत्कालिन उद्वेश्यमा सम्भव भए दुई तिहाई लिएर शासकीय स्वरुपमा हेरफेर गर्ने नभएर कम्तिमा बहुमत लिएर भएपनि पार्टी वर्षिय कार्यकालद्वारा जनतालाई सेवा गर्ने छ । ६ महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन गर्ने हालको राजनीतिक जो अवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने ।
तपाई र तपाईको पार्टी चुनावी एजेण्डा के–के हुन् ?
भौतिक क्षेत्रको विकास र आत्मिक चेतनाको विकास गर्नु हाम्रो चुनावी एजेण्डा हुन् । यी दुबै काम भविश्यको लागि अपुग भएता पनि विगतको भन्दा राम्रो गरिनेछ ।
जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गरिने कार्यहरु के–के हुन् ?
मैले माथि नै भनि सके हाम्रो प्रतिवद्वताद्वारा सार्वजनिक गरिनेछ ।
उमेद्वारको प्रतिवद्धतापत्र एव अपिल
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन !
वामपन्थीको सरकार हाम्रो अभियान !!
नेपाली जनताले जहानिया राणाशासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था र २४० वर्षिय सामन्ति राजतन्त्रको विरुद्ध लामो सशस्त्र तथा जनआन्दोलन गरी हाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका छौं । यी उपलब्धि प्राप्त गर्दासम्म हजारौं वीर नेपाली सपुतहरुले राष्ट्रको लागि बलिदान गर्नुभएको छ । वेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ । यसरी जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको जगमा आज संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भई यसको प्रारम्भिक कार्यान्वयन हुँदैछ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब यही मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक दुई चरणमा सम्पन्न हुँदैछ । विगत २००७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिने र संस्थागत हुनथालेपछि विध्वंश मच्चाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउने बारम्बार कोशिस हुँदै आएका छन् । यसपटक पनि जनताद्वारा निर्मित संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिन र ध्वंश गर्ने उद्देश्यका साथ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरु अन्तिम बलबुटाले भ्याएसम्म लागिपरेका छन् ।
यस्तो जतिल अवस्थालाई पार लगाई जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको तीब्र आकांक्षालाई पुरा गर्न हामी वामपन्थी पक्षधरहरुले चुनावी तालमेल गरेका छौं । र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने महान उद्देश्यका साथ यो तालमेल निहित रहेको छ । यस सन्दर्भमा रोल्पा जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त उम्मेदवारको रुपमा माओवादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो सदस्य एवम् रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज म दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ले उम्मेदवारी दिएको छु । साथै सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरुसँग मेरो निम्न प्रतिवद्धताहरु प्रस्तुत गर्दछु ।
ड्ड	समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्न ।
ड्ड	जनसहभागितामुलक समावेशी लोकतन्त्रको आत्मलाई सार्थकता प्रदान गर्न, प्राथमिकक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न ।
ड्ड	आम जनसमुदायलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन ।
ड्ड	कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण विकास र आर्थिक उपार्जनको मुल आधार बनाउन ।
ड्ड	निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने घना बस्तीहरुलाई व्यवस्थित शहरको रुपमा योजनावद्ध विकास गर्न ।
ड्ड	वैदेशिक रोजगारलाई क्रमशः प्रतिस्थापन र स्वदेशी रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न ।
ड्ड	आम्दानी बढाउने खर्च घटाउने, बचत गरी रोजगारको सिर्जना गर्न ।
ड्ड	युवाहरुको लागि खेलकुद मार्फत सर्वाङ्गिन विकासको आधार तयार पार्न ।
ड्ड	राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रको पहिचान र विकास गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ।
ड्ड	हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न ।
ड्ड	शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यको दायित्वलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राकृतिक स्रोतको संरक्षक र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्न ।
ड्ड	जनयुद्ध, जनआन्दोलनका सहिद, वेपत्ता, घाइते, बन्दी योद्धाहरुलाई परिवर्तनको मुख्य वहाकको रुपमा स्थापित गर्न ।
ड्ड	निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सेवाको पद्धतीको थालनी गर्न ।
ड्ड	सूचना सञ्चारको विकास एवम् पहुँच विस्तार गर्न ।
ड्ड	सबै गाउँपालिकामा बैंक स्थापना गर्न ।
ड्ड	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अवसरको प्राथमिकता निर्धारण गर्न ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ मंसिर २८, आईतवार १३:२० गते २०७७ मंसिर २८, आईतवार १३:३५ गते
हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान कुनै शक्ति र कुनै निकायबाट परिचालित छैनः स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, जिल्ला कार्य समिति संयोजक जसवीर वली स्वतन्त्र...